OwoKhozi utakule umfundi ophase ngamalengiso - Ilanga News
Home Izindaba OwoKhozi utakule umfundi ophase ngamalengiso
OwoKhozi utakule umfundi ophase ngamalengiso
UTHEMBELIHLE Tsegane obefunda eLittle Flower Combined School osizwe ngumsakazi woKhozi FM.
KULAMULE umsakazi woKhozi FM, uBheka “Beekay” Mchunu seziyime emthumeni kumfundi waseLittle Flower Combined School, eXobho, obengenayo imali yokubhalisela ukwenza izifundo zobudokotela, e-University of Cape Town.
UThembelihle Tsegane (18) (osesithombeni), uthole o-A abawu-7; kwiLife Orientation (100%), Accounting (98%), Physical Sciences (97%), Maths (97%), Life Sciences (97%), IsiZulu (87%) ne-English (88%). Uvele usamukeliwe kule nyuvesi.
utshele ILANGA ukuthi okwenze isimo sanzima kakhulu wukuthi akazange amukelwe yiNational Student Financial Aid Scheme (NSFAS).
Uthi umthwalo uyasinda kunina okunguyena obanakekelayo nezingane zakwabo, uyise wagcina ukusondelana naye ngo-2011.
“Bengibona iphupho lami lishabalala ngoba enyuvesi akungeneki uma ingekho imali ethile ehamba phambili. Kangazi ngingabonga ngithini kuBeekay, uwukhululile umoya wami,” kusho uThembelihle.
UBeekay ogcine enika lo mfundi imali ephindwe kayisihlanu kwebidingeka uthi ukholwa wukuthi imfundo yiyona engaguqula isimo somndeni.
Uthi okubalulekile yikhona ukungena enyuvesi ngoba uma umfundi esengenile, zikhona izinhlaka ezilwela abafundi nezibalekelelayo kokunye abakudingayo.
“Ngiyakhumbula ukuthi nami ngafika enyuvesi ngiphethe imiphumela emihle kuphela, imali yayingekho. Ngiyalwazi lolu sizi,” kusho uBeekay.
Lo msakazi unesikole sakhe esibizwa ngeKZN Matric Excellence, lapho kulekelelwa khona abafundi abasuke bengaphasanga kahle umatikuletsheni wabo ukuze baphucule imiphumela ezokwenza ukuba bamukelwe emanyuvesi nalabo abangaphumelelanga.
Lesi sikole sitholakala eDurban University of Technology ophikweni lwaseML Sultan naseMfolozi TVET College, eSikhaleni, eMpangeni. UBeekay utshele ILANGA ukuthi sigxile ekuqinisekiseni ukuthi abafundi bathola umatikuletsheni omuhle.
“Yonke into ethinta imfundo ngiyathanda ukuyeseka, kungakhathalekile ukuthi lowo mfundi ubefunda esikoleni sethu sokuphucula imiphumela yini noma cha.
“Okunye esesikwenzile kulo nyaka kwiKZN Matric Excellence, wukuthi sengeze uhlelo lokwenziwa kwesisekelo semfundo kusukela kuGrade-8 kuya phezulu.
“Ukulinda abantwana baze bangaphumeleli kwaGrade-12 akuyona into enhle. Kunamakilasi engeziwe ngezimpelasonto eDUT kuzona zonke izifundo, abafundi bafundiswa ngothisha ababukhali ukuze bafike kumatikuletsheni bengasabambeki,” kusho uBeekay.
Uveze nokuthi lolu hlelo lukhokhelwa u-R200 isifundo ngasinye njalo ngenyanga.
“Umoya wami uyathokoza uma kusizakale umntwana ophase kahle kodwa eswele ngoba ngelinye ilanga kuyokhanya, yingakho siqinisekisa ukuthi umntwana owafunda kwiKZN Matric Excellence siyameseka.
“Abafundi ukuze babone ukuthi silula kanjani isandla bangasebenzisa i-website yethu ethi: www.kznmatricexcellence.co.za ,” kusho uBeekay.
Utshele ILANGA ukuthi isikole sakhe kwabalungisa umatikuletsheni, kukhokhwa u-R7 500 eThekwini, kube wu-R6 000 eSikhaleni ngoba kusemakhaya.
Previous articleBavale isikole besot uthishanhloko ngokuphenduka umashonisa
Next articleUsongela abadlali umlandeli weChiefs